မန္တလေး အလှ (ပုံသေးလို့ ပြန်တင်ကြည့်တာပါ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » မန္တလေး အလှ (ပုံသေးလို့ ပြန်တင်ကြည့်တာပါ)	7
မန္တလေး အလှ (ပုံသေးလို့ ပြန်တင်ကြည့်တာပါ)
Posted by mgwalone on Jul 12, 2012 in Photography |7comments
ကျုံးတောင်ဖက် ၂၆ လမ်းပေါ်က ရိုက်တာပါ။ နေ့ခင်းပိုင်း၊ ရိုက်တာကတော့ အတော့်ကို ကြာပါပြီ၊ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
ကျုံး အနောက်မြောက်ထောင့်၊ ဘယ်နှစ်ကလဲ မမှတ်မိပါ။ ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်း နေမထွက်မီ အချိန်မှာ ရိုက်တာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ သုံးနှစ်လောက်ကလို့ ထင်ပါတယ်။ ညနေခင်းပါ။
တောင်ပေါ်က ရိုက်တာပါ။ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။
အဲဒီနေ့ပဲ နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်ခဲ့တာပါ။
has written 34 post in this blog.
View all posts by mgwalone →	Blog
Mလုလင် says: သေးနေတုန်းပဲဗျာ …. ဦးပိန် မှာ ညနေ ပိုင်း လှေစီး ရတဲ့ အရသာကို မမေ့ သေးဘူးဗျာ .. Tele ၀ယ်ဦးမှ … :-)
mgwalone says: အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Size လည်း မလျှော့ပါ။ Full Size ကိုလည်း ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သေးသွားလည်း မသိတော့ပါ။ ကြိုးစားပါဦးမယ်။
တောသားလေး says: ပုံကသေးပေမဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့အလှကတော့မသေးဘူးနော်
မမ အညာသူ says: မှန်ပါတယ်
ကြောင်လေး says:ှဆာဗာလေးမှာစိုးလို့ သဂျီးများဝိတ်လျော့ထားလေသလား၊ ပုံကောင်းလေးတွေကို ကြီးကြီးလေးအားရပါးရကြည့်ချင်လှပါ၏။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 481
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အရင်တင်ထားတဲ့ပုံဆိုဒ်ပဲနော်…
မောင်ပေ says: ပုံသေး
Comments By Postဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - ကြက်အူလှည့် - Mr. MarGaစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - may july - ဆူးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - ကိုရင်စည်သူ - ကိုရင်စည်သူပေါင်းစု - Myo Thantဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - Mr. MarGaအိုဘယ့် ...ခရီးသည် - may july - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - may july - Mr. MarGaခရီးသည်လေးသို့ - လင်းဇော် ထက် - nway kyuလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - လင်းဇော် ထက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - လင်းဇော် ထက် - မောင် ပေFloral Gift - Macro Series - ကိုရင်စည်သူ - Mr. MarGaစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Foreign ResidentWhat are some of the unique features of e-commerce technology? - ကိုရင်စည်သူမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Nyo Winလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - နွေဦး“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အတွေးလေး - မောင် ပေကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - မောင် ပေ - Mr. MarGaမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Mr. MarGa - may julyဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Mr. MarGa - ဆူးအတု - Nyo Win - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - kyeemite - padonmarရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - Mr. MarGa - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67484 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59565 Kyats )MaMa (58073 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...